Equinix NY4 Laga soo bilaabo FXCC | Samee Heshiiska Lacagta ee Forex
Home / About / Waa maxay sababta FXCC? / Xarunta Macluumaadka Equinix
Sameynta Hirgelinta Dakhliga Hore
Markaa waxaad heshay PC-da ugu dambeeyey iyo kan ugu weyn. Tons of speed processor, buuraha RAM iyo hooyada dhammaan isku xirnaanta internetka. Dhibaatadu waxay tahay, ganacsigaaga khamriga wuxuu ku tiirsan yahay tiknoolajiyadaada forex broker isticmaalaya si aad u gudbiso amarradaada iyo ka suuqyada. Xawaaraha server ee qallafsan iyo qarsoodi ayaa cuni kara faa'iidada ganacsi ee suurtogalka ah. Suuqan, waqtiga dhabta ah waa lacag.
Halkan FXCC waxaanu ku faannaa inaanu siino kobcinta ugu fiican ee macaamiisheena si ay uga ganacsadaan. Meelka dheeraadka ee dhismaha waa FXCC NY4 Equinix MT4 server.
Nidaamka adeegga Equinix NY4 wuxuu ku yaalaa rajo iyo inuu ka fogaado Wall Street, oo ku taalla bartamaha magaalada New York. Iyadoo loo marayo tiknoolajiyadda adeegsadaha, FXCC forex ECN wuxuu ku biirayaa Suuqa Dhaqaalaha Equinix. Xirfadahaagu hadda waa qayb ka mid ah shabakadaha xarumaha ganacsiga iyo xafiisyada bangiyada, oo ku yaala xarumaha xogta ee Equinix.
Waqtiga dhabta ah waa lacag suuqyada lacagta iyo kuwa haystaa wakhtigii ay sugi lahaayeen server qaali ah si ay u fuliyaan amarradaada?
Xarunta Macluumaadka Equinix NY4 ee FXCC. Awoodda Si aad qayb uga hesho Suuqa Suuqa.